YoYarLay - ကျီးမနိုးပွဲနဲ့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့ဟာ နက္ခတ်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ စာဖတ်သူတို့ သိနှင့်ပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျီးမနိုးပွဲဆိုတာကိုလည်း ကြားဖူးနေကျဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျီးမနိုးပွဲဆိုတာ ညဘက်မှာ ရပ်ကွက်ထဲရှိတာတွေ ပတ်ခိုးပြီး ကြက်ခိုး၊ သတ်ပြီး ဘူးသီးနဲ့ချက်စားကြတဲ့ပွဲများလား? မဟုတ်ပါဘူး။ ရှေးကတော့ ကျီးမနိုးပွဲဆိုတာ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စ၊ ဆေးမင်အစွမ်းကို စမ်းကြတဲ့ပွဲဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အလေ့အထတစ်ခုပါ။
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့ဟာ နက္ခတ်စုံပြီး ကြတ္တိကာနက္ခတ်နဲ့ ယှဉ်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အလျောက် ဆေးမင်ထိုးပြီး သဒ္ဓိတင်ဖို့လိုတဲ့ ကာလသားတွေကို ဒီနေ့မှာ ဆေးမင် ထပ်ဆင့်ထိုးနှံပြီး သိဒ္ဓိအသစ်တင်ပေးကြပါတယ်။ ဒါဟာ မင်ကြောင်ထိုးတဲ့ ဒုတိယမြောက်တစ်ခေါက်ဖြစ်ပြီး ဂဝံ၊ ကြောင်ရုပ်၊ သူရဿတီနတ်သမီးရုပ်တို့ကို ဖြည့်သွင်းထိုးနှံပါတယ်။ (စာရေးသူ ရေးသားတာ အစီအစဉ်မကျသောကြောင့် စာဖတ်သူတို့ နားရှုပ်ထွေးခဲ့ပါက သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ။ ပထမတစ်ခေါက် ထိုးသည့်အကြောင်းကို အလျဉ်းသင့်သလို တင်ပေးပါမည်။) ကြတ္တိကာနက္ခတ်ဟာ အဟန့်၊အမှောင်စတာတွေအတါက် အကျိုးပေးတယ်လို့ ယုံကြည်ကြတာကြောင့် ဒီလို အဟန့်အမှောင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဆေးအင်းတွေကို ဒီညမှာထိုးကြပါတယ်။
ဒီလိုထိုးပြီးရုံနဲ့ ကာလသားတို့တာဝန်မကျေပါဘူး ထိုးခဲ့တဲ့ ဆေးမင်တွေကို ဘယ်လောက်အောင်မြင်ပြီးစီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း လက်တွေ့စမ်းသပ်ရတဲ့ ထုံးတမ်းရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးမင်ဝိုင်းကနေ ထွက်လာပြီး မှောင်ရိပ်ခိုလို့ သန်းခေါင်ဗိုလ်လုပ်ကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ မှောင်ရိပ်ခိုလို့ ရွာပတ်ခိုးရပါတယ်။ ခိုးတယ်ဆိုသော်ငြား လွယ်ကူလှတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ လရောင် ထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့အပြင်ကို လူအားလုံးကလည်း မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဆေးမင်ဝိုင်းက ထလာတဲ့ ကာလသားတို့အတွက်တော့ ဆေးအောင်ရင် မှောင်ရိပ်ခိုလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ပျောက်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ခိုးလို့ရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရွာလယ်စည်းဝိုင်းထဲ စုပုံထည့်ထားရပါတယ်။ ခိုးနေတာကို မိသွားရင်တော့ ဒီ ရွာလယ်မဏ္ဍပ်မှာတင် မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကို ဆေးကြောပစ်မယ်လို့ ဆိုပြီး တစ်ကိုယ်လုံးရွှဲစိုအောင် ရေလောင်းပြီး ဆံပင်တွေကို ညှပ်လို့ ကတုံးပါရိတ်ပေးလိုက်ကြပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ မဏ္ဍပ်တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့ချည်နှောင်ထားပါတယ်။ ရောင်နီလာရင်တော့ အခိုးခံရတဲ့အိမ်တွေက ကိုယ့်ပစ္စည်းကို အခကြေးငွေနဲ့ ပြန်ပြီးဝယ်ယူရပါတယ်။ ပုံထားတဲ့ အပုံက မြင့်လွန်းလို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မဖြုတ်နိုင်ရင်လည်းဖြုတ်ယူခပေးလို့ ဖြုတ်ခိုင်းရပါသေးတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တက်ဖြုတ်လိုက်လို့ အခြားပစ္စည်းတွေ ပြုတ်ကျပျက်စီးခဲ့သည်ရှိသော် လျော်ရပါတယ်။ ဒီခိုးရာပါပစ္စည်းတွေကို ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့သင်္ကန်း ပရိက္ခရာတွေကိုဝယ်ယူပြီး ခေါင်းတုံးပြီးဖြစ်နေတဲ့ ခိုးသားတွေကို ရှင်ပြု၊ ရဟန်းခံခြင်းအမှုကို ပြုပါတယ။် ကျီးမနိုးခင်အချိန်မှာ ဒါတွေအားလုံးကို အပြီးအစီးလုပ်ဆောင်ကြတဲ့ပွဲမို့ ဒီပွဲကို ကျီးမနိုးပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်။
ရှေးက ချစ်စရာဓလေ့တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ခုချိန်မှာတော့ ကျီးမနိုးပွဲကို အခွင့်ကောင်းယူလို့ ပစ္စည်းတွေခိုးသွားကြပြီး ပြန်မပေးတာမျိုးတွေ၊ သူများအိမ်က ကြက်ကိုခိုးလို့ သတ်ပြီးချက်စားတာမျိုးတွေဟာ အချို့သော နယ်တွေမှာ ရှိနေဆဲပါ။ ရိုးရာဓလေ့ကို ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုသော်လည်း လွဲမှားနေတာမို့ ခိုးခံရတဲ့ ပိုင်ရှင်တွေလည်း ဒုက္ခရောက်ကြတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဓလေ့ကို ချစ်စရာကောင်းအောင် ထိန်းသိမ်းကြရင်း မြန်မာတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းတွေ မကွယ်ပျောက်သွားစေဖို့ ကျွန်မတို့ လူငယ်တွေ ကြိုးစားကြရအောင်လား ရှင်….
Angelic Demon (ရိုးရာလေး)